Firefox 68.0.2 inosvika ichivandudza kugarisana neGoogle Mepu | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 68.0.2 inosvika ichivandudza kugarisana neGoogle Mepu
Kazhinji izvi zvinopfuura pasina Mozilla kugadzirisa webhu browser yako. Zvichida zvaive nechokuita nenyaya yekuti hapana zvikanganiso zvakakura zvekuchengetedza zvakawanikwa mushanduro yapfuura asi, anopfuura mwedzi nehafu gare gare, Mozilla yakaburitsa Firefox 68.0.2. Iyi ndiyo yechipiri yekuchengetedza kuburitswa mune ino nhevedzano uye inouya zvakanyanya kugadzirisa bugs. Uye hongu, ivo vakashandisawo chiitiko ichi kugadzirisa kukanganisa kwekuchengetedza.
In the runyora rwemashoko Isu takangowana basa nyowani, kunyangwe rakanyorwawo se "bhagidhi": Firefox 68.0.2 inokunda rutsigiro rwemamwe marudzi emhando kana uchivhura peji munharaunda. Kubva pane izvo zvinoita, shanduro dzekare dzebvuta browser dzakaratidza mamwe magwaro aine mamwe mafonti senge akajeka zvinyorwa, chimwe chinhu chachinja mune iyi vhezheni.
Chii Chitsva muFirefox 68.0.2
Yakagadziriswa bhagi iyo yakakonzera kuti mamwe mavara akasarudzika adimburwe kubva kumazwi ekupedzisira ekutsvaga kana uchitsvaga kubva kuURL bar.
Inobvumira mafonti kutakurwa kuburikidza nema URL faira: // paunenge uchivhura peji munharaunda.
Kana uchidhinda maemail kubva kuAptlook web app haichazodhindisa chete musoro uye tsoka.
Yakagadziriswa bhagi iyo yakakonzera kuti mimwe mifananidzo irege kuratidzwa painodzoreredza, kusanganisira iyo kubva kuGoogle Mepu.
Yakagadziriswa bhuru kana ichivhura zvekunze zvinoshandiswa zvakagadziriswa sevanobata URI.
Yakagadziriswa chengetedzo bug CVE-2019-11733 iyo yaibvumidza mapassword akachengetwa mumaseji akachengetedzwa kuteedzerwa pasina kushandisa password tenzi: «Kana tenzi password yaiswa, mashandisiro ayo anodikanwa tisati tagona mapassword akachengetedzwa mubhokisi rekupinda remapepa. Izvo zvakaonekwa kuti mapassword akachengetwa imomo anogona kuteedzerwa kubhodhi clipboard kubva ku "kopi password" menyu yezviratidziro usati watanga kupinda iro tenzi password, uchibvumira mukana wekuba mapassword akachengetwa.".
Firefox 68.0.2 yave kuwanikwa kurodha pasi kubva ku website yepamutemo yeLinux, macOS, uye Windows. Vazhinji vashandisi veLinux vanoshandisa iyo vhezheni inowanikwa mumahofisi epamutemo ekuparadzira kwedu uye isu tichafanirwa kumirira maawa mashoma / mazuva kuti iyo yekuvandudza iite.
Mozilla Inoburitsa Firefox 68, Yakakura Kudiki Kuburitswa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 68.0.2 inosvika ichivandudza kugarisana neGoogle Mepu
Kubva kuChannel 77 iko kusimbiswa kwezvitifiketi zveSSL kucharatidzwa zvakafanana